Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad: Kuwa Inoo Muuqda Waxay Jilayaan Riwaayad Loo Alifay – Xuseen Noor.
Q2aad: Kuwa Inoo Muuqda Waxay Jilayaan Riwaayad Loo Alifay – Xuseen Noor.
Posted by ONA Admin	/ May 23, 2017
Waxaan kusoo sheegnay Q1aad inay jirto laba nidaam oo Gumasiga uu ku maamulo shacabka iyo dalka uu gumaysto. Xukun Toos ah (Direct rule) iyo Xukun Dadban (Indirect rule). Waxaa kaloo aan soo tilmaanay in maamulkan TPLF/Wayane kuwii ka horeeyay inuu nidaamka gumaysi ee ka jira dalka Ogadenya ahaa Xukunka Tooska ah, iadoo dalka uu si toos ah u xukumi jiray ciidanka Itobiya.
Ugu horeyn waxaad hoosta ka xariiqdaan, gumaysi oo idil wuxuu ku bilowdaa xukunka tooska ah. Ciidanka gumaysiga markuu dal qabsado, wuxuu jecelyahay in dadka shacabka ee la gumaysnayo aanay marnaba u hanqal taagin xukunka inuu dib ugu soo noqdo oy ka dhaadhacdo in aanay si dadban iyo si toos ah toona isku xukumi karin. Gumaysiga markuu dalka la wareego talaabada ugu horeysee uu qaado waa inuu laayo ama dalka ka saaro indheergaradka (intelligentsia) umadda, odayaasha laga dambeeyo iyo haduu ka jiray dalka maamul iyo nidaam isxukun ah inuu raadkooda tirtiro.
Kacdoonada iyo iska caabinta shacabka S.Ogadena ee gumaysi-diidka ah, wuxuu gumaysiga Itobiya kaga hortagi jiray ciidankiisa, suu u qabjabiyo Jabhadaha gobanimadoonka ah, islamarkaana uu uga niyad jabiyo shacabka inay ka xoroobi karaana gumaysiga Itobiya.
Waxaa intaa dheer oo gumaysiga Itobiya uu marwalba ku dadaali jiay (wixii ka horeey maamulka hadda jira ee Wayaanaha/TPLF) in uuna ka muuqanin Ogadenya shaqsi dabadhilf ah oo dalka u dhashay oo ku mana sheegta Itobiya inuu isaga jabiyay kacdoonkii kasoo horjeeday.
Siyaasadaa gumaysi ee ah inuu ku dadaalo gumaysiga in ciidankiisa oo kali ah uu ku jabiyo jabhadaha gobanimadoonka ah, waa siyaasad uu gumaysi dhamaantii ka midaysan yahay. Hasa ahaate; taariikhda shucuubtii soo halgantay waxaa laga bartay inuu Gumaysiga ku guuldaraysto inuu ciidankiisa oo kali ah ku jabiyo shacab hubka u qaatay inay xoroobaan.
Muddo kadib makuu gumaysiga qabjabo oy u cadaato inuusan ka adkaan karin shacabka gobanimadoonka ah, ayuu dib ugu soo noqdaa shacabkii uu gumaysanayay ee taagaarsanaa halganka, wuxuuna ka dhex urursadaa dabadhilifyo calooshooda u nool oo uu ka horgeeyo jabahadaha gobanimadoonka ah.
Halkaa markay gaadho arinta, wuxuu gumaysiga ka dhex baxaa saaxada wuxuuna bilaabaa inuu dalka ku maamulo Xukun Dadban (Indirect Rule) oo ah in aanay u muuqanin shacabka uu gumaysto maamula-yaashiisi hore iyo ciidankiisiiba. Wuxuu u baneeyaa saaxada inay u muuqdaan dadweynaha qaar shacabkii la gumaysanayay ka mid ah oo riwaayadaha uu gumaysiga kolba u soo alifayo shacabka ka iibinaya.
Heerkan ayuu hadda dalka Ogadenya marayaa, wuxuuna u gudbay nidaamkii gumaysi ee tooska ahaa Gumaysi dadban oo ah inuu ku gumaysto dalka koox yar oo uu heshiis kula galay la dagaalanka gobanimadoonka iyo rabitaankii shacabka ee ahayd Xoriyadda iyo cadaaladda. Isbadalkaa gumaysiga uu ku sameeyey maamulkiisa ma’ahayn mid uu doonayay ee waa arin ka dhalatay sidaan soo sheegnay gumaysiga oo ka quustay inuu ka adkaado N/hurayaasha CWXO ama ku qasbo shacabka gobanimadoonka ah inay ogolaadaan adoonsigii Itobiya ee soo jireenka ahaa.
Inta aynaan ka hadlin hawlaha loo sahlayo kooxdan yaree heshiiska la gashay gumaysiga say u fuliayaan shuruudaha lala galay, waxaa lagama maarmaan ah in aan tilmaan yar ka bixino siyaabaha lagu soo xulo kooxaha noocan ah ee gumaysiga ugu hiiliya inay la dagaalamaan shacabkooda gobanimadoonka ah. 1aad: Qorshaha gumaysiga isagoo ka duulaya inuu kala qaybiyo xooga saldhig u ah halganka ayuu shaqsiga uu doonayo inuu ka muuqdo dalka uu gumaysto wuxuu kasoo xulaa, degmada/gobolka (reerka) dagaalka ugu badan kula jira gumaysiga. 2aad: Shaqsigaasi waa inuu dabaqad hoose ahaa oo is muujiyay inuu fulin karo wixii laga doonayo, taasoo keeneysa inuu cuqdad u qaado bulshada una arko heerka uu gaadhay ee gumaysiga uu gaadhsiiyay duulaan lagu yahay. 3xaad: Waa inuusan lahayn shaqsigaasi dhaqan/diin iyo asluub uu isku celiyo oo ka horjoogsan karta inuu fuliyo wuxuu doonayo gumaysiga. Sadxedaa qodob waa caalami.
Waxaa u dheer kooxdan uu Gumaysiga Itoobiya ugu talagalay inuu ku xukumo dalka, caqli xumo lafa-jabis ah oo gaadhsiisan in aanay fahamin siday u fahmeen kuwa dhigooda ah ee Oromada ama Amxaarada in kooxda yar ee Tigreega ay doonayaan inay u adeegsadaan buburinta dalkooda. Caqli xumadooda waxaa ka mid ah inay rumaystaan riwaaadda ay jilayaan ee kolba loosoo alifayo.
Maxaa ka mid ah riwaayadaha ay jilayaan iyagoon fahamsanayn ujeedada uu ka leeyahay gumaysiga, marka laga yimaado laynta shacabka iyo boobka hantida yaree ay haystaan.
Muhimadda 1aad ee Cabdi iley iyo kooxdiisa ay fulinayaan waa in shacabka ay aaminaan in dhibka ay ku hayaan ay dawladda dhexe iyo ciidanka Itobiya oo kaliya ay ka badbaadin karaan. Sidaa daraadeed, waxaad arkaysaa kuwa siyaasiyiinta ah oo Adisababa uga cararaya oo halkaa looga ilaalinayo Cabdi iley iyo shacabka ree miyiga ah oo ciidanka Itobiya ku cararaya oo mangalyo weydiisanaya. Cabdi iley iyo kooxdiisa sidii laga filayay ayay u jilayaan riwaayaddan iyagoon ogayn ujeedada ka dambaysa ee gumaysiga uu ka leeyahay.
In loo adeegsado Cabdi Iley hoos u dhigidda qaranimadii Jamhuuriyadda Somaliya. Marka M/weynaha Somaliya ama kuwa xukuma Land-yada (Soamliland, Puntland, Jubaland iwm) la amrayo inay tagaan Jigjiga oo Cabdi iley kala hadlaan arimaha xuduudaha, ama dhibka ay Hawaarinta (Liyu Booliska) u gaysanayaan shacabka Somaliyeed ee xadka daga ujeedada Itobiya ay ka leedahay waa inay hoos u dhigto brotokoolka caalamka aqoonsan yahay ee ah in arimaha u dhexeeya laba dal ay kawada hadlaan labada M/weyne (Head of State) ee labada dal. Cabdi iley oo isla weynaaday iyo kuwii Somaliya oon fahamsanayn ujeedada Itobiya ayaa Jigjiga kuwada dhaanteeya.
Waxaa loo adeegsanayaa baabi’inta akhlaaqda iyo ku dhaqankii diinta. Wuxuu fulinayaa barnaamij ay Itobiya wadato oo ah in shacabka laga sifeeyo dareenka umadnimo (hadday tahay mid islaamnimo iyo hadday tahay Somalinimo).
Ugu dambaynta in shacabka Somaliyeed u nuglaado gumaysiga oo loo tuso in hadday ogolaadaan in loo taliyo laga badbaadin doono Cabdi iley iyo kooxdiisa.
Qodobadaa iyo kuwaan horey usoo tilmaanay, hadii la fahmo ujeedada uu ka leeyahay gumaysiga, oo la arko ayga (the dog) ninka xadhigiisa haya ee ku diraya dadka oo ah gumaystaha, waa laga guulaysan gumaysiga Itobiya siday shucuubtii lasoo gumaystay uga guulaysteen ugana xoroobeen gumaysiga.